Sudoku ohuru ohuru maka igwe gam akporo gi nwere ezigbo ihe omimi | Gam akporosis
Sudoku Plus bụ egwuregwu ọhụụ nke egwuregwu a ama ama maka gam akporo
Anyị agaghị achọpụta ihe ọhụụ a Sudoku Plus nke kụrụ ụlọ Playlọ Ahịa Google na na awade a dum visual ahụmahụ nke ọma rụrụ; na iji ihu igwe nke oge a na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu a ewu ewu ọtụtụ iri afọ.
Anyị na-ekwu okwu banyere otu egwuregwu nke ahụ Emepụtara ya na ngwụcha 70s na Japan na nke ahụ dabeere na ijupụta na mkpụrụ ndụ oghere dị ka ụzọ ọ bụla, kọlụm ọ bụla na igbe 3 × 3 enweghị ọnụ ọgụgụ ugboro ugboro. Ka anyị jiri egwuregwu sudoku ọzọ mee ya nke nwere ike ịkpali gị ịlafu onwe ya na ndị ọrụ ya nwere ọgụgụ isi na nke na-eri ahụ.
1 Sudgba Sudoku Plus
2 Otutu nsogbu siri ike ka egwuregwu ọ bụla weghara oge
3 Nọmba ebe niile
Sudgba Sudoku Plus
Enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke egwuregwu Sudoku n'ihi na ọ na-ewu ewu ruo ọtụtụ afọ, dịka anyị gosipụtara. N'okwu a anyị nwere ya na Spanish na interface zuru ezu nke na-akpọ oku na-egwu otu egwuregwu ọzọ; karịsịa ma ọ bụrụ na anyị emetụbeghị ya ma chọọ ịmalite.
Ka anyi kwuo Sudoku Plus bu nwee ike ime ka anyị nwee ọchịchọ ịmata na ịmara na anyị ekwesịghị itinye oghere ndị nwere oghere nwere ọnụọgụ abụọ n'otu ahịrị, kọlụm, ma ọ bụ igbe 3 × 3.
N'eziokwu na ala anyị nwere ahịrị na nọmba niile site na 1 ruo 9. Naanị anyị ga-pịa oghere efu ka ogidi, ahịrị na oghere 3 × 3 nke ya na-emepụta na agba ntụ ka anyị wee họrọ nọmba.
Otutu nsogbu siri ike ka egwuregwu ọ bụla weghara oge
Ugbua etinye oghere efu, anyị nanị pịa a ọnụ ọgụgụ na anyị ga-ahụỌ bụrụ na anyị adaghị, igbe niile ebe otu ọnụ ọgụgụ ahụ dị ga-amụnye na agba ntụ. Ọ bụrụ na anyị ada ada ọ ga-apụta na-acha uhie uhie.
Anyị nwere ugboro atọ, kemgbe na nke atọ egwuregwu ahụ ga-akwụsị; Ọ gwụla ma anyị wepụrụ mgbasa ozi ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu na-egwu ọkwa ahụ. Nke ahụ kwuru, Sudoku Plus bụ egwuregwu na-egosi anyị mgbasa ozi na egwuregwu ọ bụla, ọ bụ ezie na a ghaghị ikwu ya na mgbe ọ gachara 5 sekọnd anyị nwere ike iwepụ ya site na ịpị x.
Sudoku Gụnyere eji ntanetị 9 × 9, ihe ngwọta pụrụ iche na ọtụtụ nsogbu iji nye ọtụtụ dịgasị iche iche egwuregwu sudoku nakwa na anyị arụnyere ya mgbe niile ka anyị gakwuru ya iji nwee ọ enjoyụ oge mgbagha na ọnụọgụ.
Nọmba ebe niile
Ka anyị na-eche ihu egwuregwu mkpanaka, anyị nwere nhọrọ iji gbanwee ọdịdị egwuregwu ahụ na isiokwu dị iche iche, gbanwee kama ọnụọgụ ka ọ bụrụ ọdịdị ma ọ bụ nabata ihe ịma aka kwa ụbọchị ka ihe niile wee nwee obi ụtọ. Egwuregwu a tụụrụ ime nke ọma nke anyị ga-eji na-akpọsa mgbasa ozi, belụsọ na anyị chọrọ iwepu ya site na otu ugwo nke euro 2,39.
Sudoku Gụnyere nwere ọtụtụ mmeri maka etu esiri tụọ ya anya, nke ọma na ndị animations na-ewe anyị ka ike na ngwa ngwa egwuregwu; tumadi mgbe anyị chọtara iwu egwuregwu a ma anyị ghọrọ ha.
Sudoku Plus ị nwere ya n'efu maka Storelọ Ahịa Play na mgbasa ozi ndị ahụ na egwuregwu ndị Japan a ma ama na ọ bụrụ na ị kwụ, ọ ga-ejide gị nke ukwuu.
A dum Sudoku egwuregwu na gị free gam akporo mobile, na ọtụtụ ụdịdị na a oké visual ọnụnọ.
Aesthetically-enweta nkwanye ọtụtụ
Nkụzi kachasị mma iji mụta igwu egwu
Ọ bụrụ na ịchọghị mgbasa ozi ị ga-akwụ ụgwọ naanị otu ugboro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Sudoku Plus bụ egwuregwu ọhụụ nke egwuregwu a ama ama maka gam akporo
Nokia 3.4 gosipụtara Snapdragon 460 yana nnwere onwe ụbọchị abụọ